Israa’iil ayaa ‘aamusnaan’ u oggolaanaysa Yuhuudda inay ku tukadaan dhismaha Al-Aqsa: Warbixin - Wardeeq 24 TV Israa’iil ayaa ‘aamusnaan’ u oggolaanaysa Yuhuudda inay ku tukadaan dhismaha Al-Aqsa: Warbixin Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Israa’iil ayaa ‘aamusnaan’ u oggolaanaysa Yuhuudda inay ku tukadaan dhismaha Al-Aqsa: Warbixin
Israa’iil ayaa ‘aamusnaan’ u oggolaanaysa Yuhuudda inay ku tukadaan dhismaha Al-Aqsa: Warbixin
Dawladda Israa’iil ayaa u oggolaanaysa Yuhuudda inay ku tukadaan masaajidka Al-Aqsa ee ku yaal Bariga Qudus ee la haysto-oo sidoo kale Yuhuuddu u taqaanno Macbadka Buurta-tallaabo halis u ah inay beddesho xaaladda goobta, The New York Times ayaa werisay.
Sheeko la daabacay Talaadadii, Times ayaa sheegtay in Rabbi Yehudah Glick uu sameeyay “dadaal yar si uu u qariyo ducadiisa” oo xitaa uu toos u sii daayay.
Daqiiqad muhiim u ah halganka qaranka Falastiin
Rajada qoysaska reer Falastiin ee jaban sida sharciga Israel uu ku egyahay
Booliiska Israa’iil ayaa masaajidka Al-Aqsa u banneeyay dadka Yuhuudda ah ee soo booqda
Falastiiniyiinta ayaa cambaareeyay ‘duullaankii’ ay ciidamada Israa’iil ku qaadeen Al-Aqsa
Aaggu wuxuu ku yaallaa Magaalada Qadiimiga ah ee derbiga leh iyo qayb ka mid ah dhulkii Israa’iil ku qabsatay dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967 -kii. Israa’iil waxay qabsatay Bariga Qudus sannadkii 1980 -kii tallaabo aan marnaba beesha caalamku aqoonsanayn.
Laga soo bilaabo 1967, Urdun iyo Israa’iil waxay ku heshiiyeen in Waqf, ama aaminaadda Islaamka, ay maamuli doonto arrimaha gudaha xarunta, halka Israa’iil ay maamuli doonto amniga dibadda. Dadka aan muslimka ahayn ayaa loo oggolaan doonaa inay goobta soo galaan saacadaha booqashada, laakiin looma oggolaan doono inay halkaas ku tukadaan.
Sida laga soo xigtay Times, Glick-oo ku dhashay Mareykanka, xildhibaan hore oo garabka midig ah-ayaa hormuud u ahaa dadaallada lagu beddelayo xaaladda hadda jirta tobanaan sano, wuxuuna sheegay inuu dadaalkiisa ku sifeynayo “xorriyadda diinta”.
Dhaqdhaqaaqyada kale ee soo kacaya, sida Temple Mount Faithful iyo Machadka Macbadka, ayaa sidoo kale ka horyimid mamnuucidda dowladda Israel ee u oggolaanshaha Yuhuudda inay galaan dhismaha Masjidka Al-Aqsa.
Previous articleDeg-Deg: reysarwasaare rooble iyo wakiilada beesha caalamka oo hada wada hadal usocdo+ujeedka.
Next articleWaxay guursadeen jabhadihii hore ee Kashmir, dumarka reer Pakistan hadda waxay ku sugan yihiin meel hoose